सिक्किम भारतले निल्यो, नेपाली आन्दोलन गर्छन्।
कालापानी भारतले खायो, नेपाली कूटनीति भन्छन्।
आजका दिनमा अरूका त के कुरा, स्वयं पृथ्वीनारायण शाह प्रधानमन्त्री र अमरसिंह थापा परराष्ट्र मन्त्री भएका भए पनि ‘यस्तो तातो रिसले हुन्छ ? हामी कूटनीतिक पहल गर्दै छौँ। बिस्तारै कुरो मिलाएर फिर्ता त ल्याउँछौँ, ल्याउँछौँ’ भनेर भन्थे।
नेपाली भूमि जसले मिचे पनि मार्च गर्ने, विज्ञप्ति निकाल्ने वा एक इन्च छाड्दैनौँ भन्ने काम चैँ देशभित्र सुनाउन मात्र हो। हाकाहाकी र प्रष्टसँग ‘हाम्रो भूमि फिर्ता गर’ भन्ने हिम्मत सरकारमा हुँदा राष्ट्रवादी न परस्तवादी, कुनै माईका लालसँग छैन। प्रतिपक्षी हालालुलाका त के कुरो गराइ भो र ?
डा. केसीले मोदीलाई खुलापत्र लेख्नुभो। म चैँ डा. केसीलाई लेख्दै छु।
डा. केसी !
अति भएपछि खति हुन्छ। तपाईंकै कारणले चिकित्साशिक्षामा भएका सुधार तपाईं स्वयं नै ‘सस्तिँदै’ जाँदा हामीले गुमाउनु नपरोस् ! आगे यहाँको जो विचार।
पृथ्वीनारानदेखि चलेको सपना पूरा गर्ने काम बीपी, महेन्द्र, वीरेन्द्र, मनमोहन, गिरिजा, मदन, प्रचण्ड र केपी कसैका पालामा पनि रोकिएन। हाम्रो सौभाग्य, सबका अनुयायीले सबैका सपना पूरा गरेरै छाडे। तर, मेरा सपना चैँ ‘म’ बनूँ र ‘मेरा’ परिवार बनून्बाहेक धेरै छैनन्। उहाँहरूको त छ होला नि ?
नेपाली कानुनअनुसार– ‘आरोपीलाई आफ्नो बचाउ गर्न कानुन व्यवसायी राख्न पाउने हक हुनेछ। आरोपीले आफ्नो पक्षमा पैरवी गर्न कानुन व्यवसायी राख्न नसकेमा सरकारले सोको व्यवस्था गर्नेछ।’ यही बुँदाअनुसार तिनले कुनै गोलाप्रथाले छानिएका वकिल ‘पाएका’ भए गुनासो हुन्नथ्यो। ‘धर्म’का भेषमा पैसा बोल्यो।
डाक्टर त दूर, शहरी ट्याक्सीचालकले समेत सेवाग्राहीलाई भन्न नमिल्ने ‘नाइँ’ भन्ने अधिकार वकिलले पाएका छन्। ‘मैले देखेकै मेरो घरको चोरलाई चोर हैन भनेर पैरवी गर्ने मेरो व्यावसायिक दायित्व हो’ जस्तो दलिल चैँ चल्दैन, है। ‘म गर्दिनँ’ भन्न नमिल्ने एउटा कारण देखाइयोस् त।
नभएको बिरामीलाई बिरामी छ भनेर अस्पतालमा भर्ना गरी हिरासतबाट बचाउने र नेपालभित्र सम्भव भएको उपचारका लागि ‘विदेश जानुपर्छ’ भनेर राज्यको पैसा खर्च गराउने चिकित्सक पनि मेडिकल काउन्सिलअनुसार अपराधी नै हुन्।
प्राणीको समानलिंगीबीच सबैभन्दा आकर्षक देखिऊँ र विपरीतलिंगीले मलाई नोटिस गरोस् भन्ने रहर जिनमै हुन्छ र ‘अपिल’ उद्देश्यअनुसार बदलिन पनि सक्छ। ‘मेरी मर्जी’ भन्नेको घरभित्रको पहिरन र सौन्दर्यचेतको ‘मापदण्ड’ बाहिर जाँदा बदलिनुमा विज्ञानलाई भ्रम छैन। यो र त्यो त भन्ने ‘कुरो’ न हो।